Igalari yoLutsha lweeNgubo zoLutsha - Ulutsha Imiboniso Bhanyabhanya
Amakhadi Ahlawulwe Kwangaphambili
Abanini Bamakhaya Isiqinisekiso
Igalari yoLutsha lweeNgubo zoLutsha
Usuku lokuzalwa uBash!
Isinxibo esifanelekileyo sepati sesinye esingafanelanga isihlandlo kuphela kodwa esikwalingana nomzimba wakho kwaye sikunceda ukuba ubonakale umhle. Apha, intombazana yokuzalwa ikhanya kumdibaniso ongenamandla ozalisekisa ngokugqibeleleyo ithoni yolusu. Unokwenza okufanayo ngokukhetha imibala ethambisa ulusu lwakho kunye nokuthenga ilokhwe esebenza nohlobo lomzimba wakho.
Shiny Sweet Elishumi elinesithandathu
Ukuguqula ishumi elinesithandathu sisihlandlo esingenakulibaleka, ke qiniseka ukuba isinxibo sakho asilibaleki ngokufanayo ngokukhetha isitayile esikunceda ukuba ume ngaphandle kwesihlwele. Enye indlela yokwenza njalo kukukhetha nokuba yingubo ekhazimlayo okanye yentsimbi ngombala odlamkileyo. Ayizukuphela le ndlela yokunxiba ivelele kwiifoto, kodwa iya kukunceda uzive ukhethekile kusuku lwakho olukhulu.
Abafazi baseLatina babhiyozela iQuinceañera, elingana neshumi elinesithandathu elimnandi. Nangona kunjalo, kulo mbhiyozo, amantombazana alishumi elinesihlanu.
Le ilokhwe elungileyo kwintombazana engathanda ukongeza igophe kumzobo wayo kodwa ikwafuna ukujonga okwangoku. IiRuffles ziya kukunceda ukuba uzive uthambile kwaye ungowesifazana, njengoko kuya kubakho ukuhonjiswa kwere rose.
Ubusuku obonwabisayo oya kufuna ukubukhumbula, ke khetha uhlobo lwesinxibo ongazukuziva ukhululekile ukudanisa kulo kodwa olukunceda ubonakale umhle!
Unokwenza oko ngokukhetha ilokhwe egxalabeni, kodwa ukuba ufuna inkxaso ethe kratya, imitya yespaghetti esincinci ibukeka intle. Nokuba yeyiphi indlela, uya kujongeka umhle.
Ukuthweswa isidanga lixesha lokuba neefoto ezininzi, kwaye ibonisa iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo isinxibo osithandayo. Kwelinye icala, ungahamba nesinxibo senkosazana esisitayile. Olu hlobo lobufazi kunye nolothando olunokukunceda ukubeka imbeko. Kwelinye icala, ungasoloko uhamba nento encinci egadayo, enje ngengubo emfutshane okanye ibhlukhwe.
Ukufezekisa ngalo naliphi na ixesha
Lo mbala weklasikhi omnyama nomhlophe ulungele nawuphi na umsitho. Ungayinxiba le ndlela yokunxiba kwi-prom, ukuthweswa izidanga, kunye nasemtshatweni wangokuhlwa xa isimemo sifikile.
Xa kuziwa ekudibaniseni izixhobo kunye nale ndlela yokunxiba, kuncinci kunoko kunoko, njengoko ubucwebe obunenkalipho buya kuphazamisa inkcukacha zentyatyambo ezintle. Ubucwebe obulula lukhetho olufanelekileyo.
Umbala, ngakumbi onesibindi ngokungalindelekanga, ujongeka ulungile kwiinyanga zasentwasahlobo nasehlotyeni. Imithunzi yeorenji okanye epinki enokubonakala ngathi ihlaziya ngoku nangangoku.
Ukongeza, unokugcina ukujonga kukhululekile ngokunxiba iinwele zakho phantsi kunye nendalo. Nangona kunjalo, ukuba ucwangcisa ukuya kulwamkelo olusemthethweni okanye omnye umsitho obumnandi, ukunxiba iinwele zakho kuya kujongeka njengokuphakamileyo.
Ukuhonjiswa kwengubo kunokuthatha ngokulula isitayile ukusuka kwesiqhelekileyo ukuya kokungaqhelekanga. Amarhinestones anomdla okanye iigugu accents zinokongeza nje inani elifanelekileyo le-oomph kwinkangeleko yakho. Ukudibanisa ezo zambatho ngombala wasebukhosini njengombala omfusa ngekhe kwenzakalise.
Ipati yePhuli yeHlabathi
Ukuba uzimasa iphuli okanye ipati yaselwandle, uya kufuna ukukhetha ilokhwe ebonakala ingenamsebenzi, kodwa intle kakhulu.
Ukukhetha kuloo nto inombala oshushu kunokongeza kuphela kubusuku bosuku. Khumbula kwakhona ukugcina konke ukujonga kwakho kulula.
isipho esifanelekileyo sokuthweswa izidanga kubazali
Izixhobo ziphambili ekunxibeni imbonakalo enokuthi endaweni yoko ibe lula. I-shawl yoboya obufihliweyo, i-barrette entle, namacici onke anokukunceda unxibe, kwaye ukongeza, uyakhazimla!
Kumsitho wehlobo lasehlotyeni, khetha isitayile ekulula ukunxiba kodwa nobushushu bemozulu. Ukongeza, ukuba ufumana ilokhwe oyikhethileyo imfutshane, khetha iiflethi, umzekelo, imbadada ethe tyaba, ngaphezulu kwezithende. Oku kuyakunika inkohliso yobude ngelixa unika intuthuzelo eyongezelelweyo.
Ngalo lonke ukhetho olukhulu lwelokhwe yokunxiba, uqinisekile ukufumana isimbo esifanelekileyo kuwe ngombala, uhlobo lomzimba, kunye nomsitho.
Isisa Imibutho Igadi Pests Iziqinisekiso Safe Pranks And Practical Jokes Umtshato Uthandekayo
Ulusu Care Kanye Nonyango
Uqhawulo Mtshato Ngurhulumente
Ukunikewa Izipho Zomntwana
Abantwana' Games And Software
Imibongo yomzalwana osweleke
pranks ukwenza ekhaya kubazali bakho
indlela yokubuyisela uziphu kumkhondo
Ineminyaka emingaphi ukuba ikati kufuneka ikhutshwe
inde kangakanani i-avareji yomfazi oneminyaka eli-13 ubudala
Ubuxoki Ukuba Likhoboka
Udliwanondlebe Kwespecial Umdla